General Chibvumirano Mamiriro ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Usati wahaya chero ehumwe masevhisi atinoisa iwe pawebhusaiti ino, zvakakosha kuti iwe uverenge mamiriro nemitemo inoshanda kune kupihwa kwemasevhisi anopiwa nevateveri.online, yakanangana nebasa rayo guru rechigadzirwa kana tsananguro yebasa. .: Kutengeswa kwezvigadzirwa mumadhijitari fomati uye pamhepo kushambadzira masevhisi.
Mushandisi anogona chete kuwana uye kuhaya ino vateeri.online masevhisi mushure mekuverenga uye kugamuchira aya mvumo mamiriro.
vateveri.online inochengetera kodzero yekushandura kana kuchinja aya mamiriro chero nguva. Kana iyo yekugadziridzwa ichiita shanduko huru mumatemu, vateveri.online inokuzivisa iwe nekutumira chiziviso pane ino webhusaiti.
vateveri.online inoita kuti inowanikwa inotevera masevhisi pasi pemamiriro avo chaiwo echibvumirano:
Semamiriro ezvinhu kubvumirana masevhisi anopihwa, iwe unofanirwa kunyoresa pane inoenderana vateveri.online fomu uye kupa ruzivo rwekunyoresa. Ruzivo rwekunyoresa rwaunopa runofanira kuve rwakajeka, rwakazara uye rwakagadziridzwa nguva dzese. Kukundikana kuita izvi kunokanganisa mazwi, izvo zvinogona kukonzeresa chibvumirano nevateveri.online.
Mamwe masevhisi anogona kusanganisira mhinduro dzechitatu. vateveri.online inogona kupa zvinongedzo kune wechitatu-bato webhusaiti sevakabatana vanobatana nevateveri.online yekupa mamwe masevhisi.
Iwe zvakare unobvumirana kuti Service inogona kusanganisira mhinduro dzekuchengetedza dzino dzikamisa mashandisiro uye kuti iwe unofanirwa kushandisa masevhisi aya zvichienderana nemirairo yekushandiswa yakagadzwa nevateveri.online neVanochengetedzeka Vabatana navo uye kuti chero kumwe kushandisa kungave kukanganisa.
Izvo zvinorambidzwa kuchinja, kukamba, kudzosera injinjini, kuora, disassemble kana neimwe nzira shandura tekinoroji yekuchengetedza yakapihwa nevateveri.online chero chikonzero.
Unobvuma kubhadhara masevhisi anoitirwa vateveri.online nenzira dzekubhadhara dzinogamuchirwa nevateveri.online uye kune imwe mari inoenderana (kusanganisira mutero uye mubhadharo wakanonoka kubhadharwa, sezvakakodzera)
Mutengo wemasevhisi kana infoproductos inotengeswa nevateveri.online inosanganisira iyo Spanish VAT. Nekudaro, iyo yekupedzisira mutengo wekuraira kwako inogona kusiyana zvichienderana nehuwandu hweVAT hunoshanda kune yekuraira. Zvekudaira zvakatemerwa dzimwe nyika dzeEuropean Union, Spanish VAT ichabviswa uye mutero weVAT unoenderana nenyika yaunoda kuenda unoshandiswa. Mutengo wekupedzisira uchaonekwa panguva yekusimbiswa kweodha yako uye inoratidza chiyero cheVAT chinoenderana nenyika yekuenda kune zvigadzirwa.
Mitengo yeMasevhisi inogona kuchinja chero nguva chero panguva yekuita uye yakasarudzika yega vateveri.online. Iwo maSevhisi haapi mutengo wekudzivirira kana kudzorera mari kuitira kudzikiswa kwemitengo kana kukwidziridzwa kupihwa.
vateveri.online inogamuchira idzi nzira dzekubhadhara:
Chikumbiro chimwe nechimwe chinotarisirwa kuongororwa uye kubvumidzwa nevateveri.online
vateveri.online inogona kupa imwe mhinduro kune iyo mutengi kusanganisira kuendesa kune network yevateveri.online vanobatana.
Izwi rekuti "risingagumi" rinoenderana nechikamu chakakodzera chekushandisa. Tsananguro yekushandiswa kwakanaka inoonekwa nevateveri online, mune yayo yega uye yakasarudzika sarudzo. Vatengi vanotevera.online vanofunga kunge vari kushungurudza sevhisi vachasangana nevateveri.online.
vateveri.online inochengetera kodzero yekumisa basa kana tikatarisa kuti inodarika kushandiswa kwakaringana kwekuita.
vateveri.online haizovimbisa kuti kuwanikwa kwechinhu chebasa chechibvumirano ichi chiri kuenderera uye chisingapindiki, pamwe nekurasikirwa kwedata inotambirwa pamaseva ayo, kukanganisa kwemabasa ekutengesa kana chero kukuvara kunobva mukushanda kwemasevhisi. kana nezve zvinotarisirwa zvinogadzirwa kune Mutengi, semhedzisiro ye:
1. Zvinokonzera kupfuura kutonga kwevateveri. Online uye fortuitous uye / kana zvikonzero zvikuru.
Nenzira iyi, Mutengi anobvuma kutsigira aya mamiriro mukati memiganhu inonzwisisika, yaanoregedza pachena kukumbira chero chibvumirano kana chekuwedzera-chibvumirano kubva kuInternet SL yezvikanganiso, zvikanganiso uye kushandiswa kwebasa rakabvumiranwa.
Online SL haizove nemhosva mune chero zvipi zvikanganiso kana kukuvara kunogadzirwa nekusaita uye kwakashata kwekutenda kushandiswa kwebasa neMutengi. Kana online Online SL haizove nemhosva yezvakakura kana zvidiki mhedzisiro nekuda kwekushomeka kwekutaurirana pakati peInternet SL neMutengi kana zvichikonzerwa nekusashanda kweemail yakapihwa kana kukanganisa kwe data rakapihwa neMutengi mune yavo mushandisi kunyoresa kwevateveri. Online .
Haubvumirwe kugara nevateveri.online kana iwe usingagutsikane nebasa redu.
• Alter, elude, reverse engineer, decompile, disassemble kana neimwe nzira shandura tekinoroji yekuchengetedza yakapihwa nevateveri.online.
Kodzero yekubvisa, zvinoenderana nechinyorwa 103.a yemutemo 1/2007, haichashanda kune kupihwa masevhisi, kana sevhisi yaitwa zvizere, kana kuuraya kwacho kwatanga, nemvumo yaitaurwa yekutanga mutengi uye mushandisi uye nekuzivikanwa kune kwake chikamu kuti anoziva kuti, kana chibvumirano chanyatsoitwa nevateveri.online, achange arasa kodzero yake yekubvisa.
Mushure mekugamuchira maitiro emabasa echibvumirano, vateveri.online, vachakuzivisa iwe nezvezuva rekutanga kwavo.
Kana iyo kodzero yekugadzirisa ichiitwa 10 mazuva Isati yatanga sevhisi, vateveri.online vanozodzosera iyo mari yakagamuchirwa pasina chengetedzo uye kana mushure memazuva gumi nemana. Kana iko kwambotaurwa kodzero yakanga yaitwa mune a kutara zvisingasviki mazuva gumi, 50% yemari yacho ichadzoserwa, uye kana ikazoitwa gare gare, hapana mari inobhadharwa.
Saizvozvo, vateveri.online vanogona kuramba vachipedzisa kontrakiti kana mubhadharo unoenderana usingaitwe nemushandisi kana zvimwe zviito zvakatemwa muchikamu pazvinhu zvinokonzeresa chibvumirano chakaitwa.
Kana iwe uchida kukanzura chibvumirano chako nevateveri.online, iwe unofanirwa kutisangana nesu nechikumbiro chekubvisa chibvumirano basa risati ratarwa raita basa (ona maitiro uye fomu yekubvisa pazasi)
vateveri.online inovimbisa mutengi kudzoreredzwa kwemari dzakabhadharwa mukati menguva gumi nemana (14) yekarenda mazuva akaverengerwa kubva pazuva rekutaurirana kwakasimba kwekushandisa kodzero yake yekubvisa kana izvi zvichisangana nezvinodiwa uye zvakagamuchirwa vateveri.online.
Kana sevhisi inova chinhu chechibvumirano ichi yanga yatanga panguva yekubvisa (mazuva gumi nemana), zvinoenderana nechinyorwa 14 cheMutemo 108.3/1, Online SL inogona kuchengetedza chikamu chakaenzana chinoenderana nebasa rakapihwa, kusanganisira basa rekutsigira uye, muchiitiko chekuti sevhisi yakapihwa zvizere, zvinoenderana nechinyorwa 2007.a chemutemo wataurwa pamusoro, kodzero yekubvisa haizoshanda.
Mushandisi / mutengi anogona kutizivisa nezvechikumbiro kana kubviswa, kungave ne email kuenda: info (at) vateveri.online kana nepositi mail pakero inoratidzwa pafomu yekubvisa.
Kutarisirwa kwe Online SL
info (at) vateveri.online
Saina chikumbiro chako chekuda / chekubvisa kana zvikaudzwa kune Online SL mupepa fomati
Zvinoenderana neOrganic Law 15/1999, yaDecember 13, pamusoro peDziviriro yeDunhu Dhata, Online SL inozivisa mushandisi kuti pane faira remunhu iro rinozivikanwa se "Vatengi / Vatengesi" rakagadzirwa uye uye riri pasi pebasa re Online SL ine zvinangwa zvakakodzera zvekurapa pakati pazvo zvinotevera:
Online SL yakazvipira kuzadzisa chisungo chayo chekuvanzika kwemunhu data uye basa rayo rekuzvichengeta, uye kutora matanho ekudzivirira anodiwa nemutemo unoshanda kuti vadzivise shanduko, kurasikirwa, kurapwa kana mukana usingatenderwe, nguva dzose zvinoenderana nehunyanzvi hwetekinoroji iripo.
Mushandisi anogona kutungamira kutaurirana kwako uye kushandisa kodzero dzekuwana, kudzokorodza, kudzima uye kupikisa kuburikidza neemail: info (at) vateveri.online pamwe neufakazi hwechokwadi mumutemo, senge fotokopi yeDNI kana zvakafanana, zvichiratidza mune iyo nyaya " DATA KUSVIRIRA ”.
Ruzivo rwese uye zvinyorwa zvinoshandiswa panguva yechibvumirano, kuvandudza uye kuitiswa kwechibvumirano mamiriro anodzora hukama pakati peiyo Online SL neMutengi zvakavanzika. Ruzivo rwekuvanzika haruzonzwisiswe seizvo zvinoziviswa nechibvumirano pakati peMapato, izvo zvinova pachena nekuda kwechikonzero chimwe chete kana izvo zvinofanirwa kuziviswa zvinoenderana nemutemo kana nedare rekutonga kwesimba rinokwanisa, uye izvo zvinowanikwa mumwe wechitatu uyo ​​asiri pasi pechisungo chero chipi zvacho chekuvanzika. Mapato ese ari maviri anosungirwa kutevedzera basa rekuvanzika uye nekuzvichengeta kwenguva pfupi yemakore maviri (2) makore mushure mekupera kwezvataurwa pamusoro apa zvibvumirano zvinodzora hukama hwe Online SL neMutengi.
vateveri.online inochengetera kodzero yekugadzira, chero nguva uye usati waona chiziviso, modified uye kugadzirisa kune ruzivo rwuri paWebhusaiti, kugadzirisa kwayo uye kuratidzira, mamiriro ekuwana, mamiriro echibvumirano, nezvimwe. . Saka iyo USER inofanira kuwana yakagadziriswa mapeji eiyo peji.
Pasina mhosva vateveri.online inokanganisa chero kutyora kwechibvumirano kunoitika pane yako nzvimbo, kusaitira hanya nezvesaiti, iyo sevhisi kana chero zvirimo, kune chero marariro akarasika, kurasikirwa kwekushandisa, kana chaiyo, yakakosha, isina kukuvara kukuvara, zvinongoitika, kuranga kana kukonzera kwerudzi chero rupi zvarwo kubva pakushandiswa zvisirizvo newe zvishandiso zvakapihwa.
Basa chete revateveri.online, richava rekupa iyo yekushambadzira kontrakiti sevhisi pasi pemamiriro uye mamiriro anoratidzwa mune ino chibvumirano mutemo.
vateveri.online haizopi mhosva kune chero mhedzisiro, kukuvara kana kurasikirwa uko kunogona kubva mukushandiswa zvisizvo kwezvinhu zvigadzirwa kana masevhisi anopihwa.
Online SL ndiye muridzi weese maindasitiri uye njere kodzero dzevateveri peji rewebhu, uye zvezvinhu zvirimo, pakati pazvo pane magazini anotakurika padandemutande.
Izvo zvakarambidzwa zvachose kugadzirisa, kuendesa, kugovera, kuisazve, kuendesa mberi kana kushandisa zvese kana chikamu chezvirimo zveruzhinji rwevanhu kana vezvokutengeserana zvinangwa pasina mvumo yeInternet SL.
Muchiitiko icho mushandisi achida kutaura chero chiitiko, kupindura kana kuita chikumbiro, anogona kutumira email kune info (ku) vateveri.online inoratidza zita rake uye surname, sevhisi yakawanikwa uye ichitaura zvikonzero zveaari kuda.
Kuti ubate Online SL kana kusimudza kusahadzika, kubvunza kana kudaira, unogona kushandisa chero nzira dzinotevera:
Mutauro uyo chibvumirano chichagumiswa pakati pevateveri.online uye Mutengi chiSpanish.
vateveri.online uye THE USER, vachatongwa kugadzirisa gakava ripi zvaro rinogona kubuda kubva mukuwana, kana kushandiswa kweichi peji reWebhu, nemutemo weSpanish, uye kuzviisa kuMatare neMatare eDhorobha reGranada.